အချို့သောလိမ္မာပါးနပ်မှုကိုအသုံးပြုပါ Martech Zone
အချို့သောတီထွင်ကြံဆမှုကို သုံး၍ Captcha ကိုရှောင်ပါ
စနေနေ့, ဇူလိုင်လ 14, 2007 တနင်္ဂနွေ, အောက်တိုဘာလ 4, 2015 Douglas Karr
ငါဝက်ဘ်ပေါ်တွင်ဆက်လက်သုံးစွဲရန်အဆိုးဝါးဆုံးသုံးစွဲသူအတွေ့အကြုံတစ်ခုဖြစ်နိုင်သည် captcha နည်းပညာ။
Captcha သည်ပုံတစ်ပုံကိုနံပါတ်များ၊ အက္ခရာများနှင့်တစ်ခါတစ်ရံတွင်အခြားနယ်ပယ်သို့ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်လိုသောစကားလုံးများဖြင့်ထုတ်လုပ်သည့်အခါဖြစ်သည်။ ဤသည်မှာ comment spammers များထံမှအလိုအလျောက်ဖွဲ့စည်းထားသော post များကိုတားဆီးရန်ဖြစ်သည်။ ကုဒ်နံပါတ်ကိုသူမရှင်းနိုင်လို့အတုအယောင်ပို့စ်များကို တင်၍ မရပါ။
၎င်းသည်ကြားဖြတ်နည်းပညာဖြစ်သည်။ ငါမှတ်ချက်တစ်ခုတင်ရန်သို့မဟုတ်အချို့သော site ပေါ်တွင်မက်ဆေ့ခ်ျကိုပေးပို့ဖို့ဘယ်လောက်ငါ Captcha လယ်ပြင်အားဖြင့်ကြားဖြတ်ငါဘယ်လောက်အကြိမ်ငါသည်သင်တို့ကိုမပြောနိုင်ပါ။ ၎င်းသည်စီးဆင်းမှုကိုရပ်တန့်ပြီးအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံကိုရပ်တန့်စေသည်။ ငါမခံနိုင်ဘူး တစ်ခါတစ်ရံမှာကျွန်တော်ဟာအရှုံးကိုရပ်တန့်လိုက်ပြီးဆိုက်ကိုမဝင်ရတာ (သို့) ဒီကိရိယာကိုသုံးတာကိုရပ်လိုက်တယ်။
၎င်းသည်ကွန်ပျူတာမှထုတ်လုပ်သည်။ ကွန်ပျူတာတစ်ခုကနေထုတ်လုပ်တာကတစ်နေ့နေ့မှာကွန်ပျူတာတစ်လုံးပျက်သွားလိမ့်မယ်လို့ပြောတယ်။ ဒါဟာအချိန်ကာလပဲ။
ယင်း အပျင်းကြီးသော။ ပြtheနာကိုဖြေရှင်းမည့်အစားအသုံးပြုသူသည်၎င်းကိုပတ် ၀ န်းကျင်တွင်အလုပ်လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။
ကျွန်ုပ်၏ Comment Form plugin ကိုရေးသည့်အခါ Captcha ကိုဘာကြောင့်အသုံးမပြုခဲ့တာလဲဟုရှေးရှေးစုံတွဲတစ်တွဲကကျွန်ုပ်အားမေးမြန်းခဲ့သည်။ ငါအတွေ့အကြုံလုပ်ချင်သောကြောင့်ငါမသုံးခဲ့ပါဘူး ပိုကောင်းcomment spam တွေကိုရှောင်ရှားရင်းပိုဆိုးတာကမကောင်းဘူး။ ဆော့ဖ်ဝဲကုမ္ပဏီများသည်သေးငယ်သောတီထွင်ကြံဆမှုအနည်းငယ်သာဖြင့်ဤစိန်ခေါ်မှုများကိုပြတ်တောက်စေခြင်းမဟုတ်ဘဲပျော်စရာဖြစ်စေနိုင်သည်။
ငါ့အပေါ်မှာငါ့စိန်ခေါ်မှုမေးခွန်း အဆက်အသွယ်စာမျက်နှာ တော်တော်လေးရိုးရှင်းပါတယ်၊ “ ငါ့ဘလော့ဂ်ရဲ့နောက်ဆုံးစကားလုံး” ။ သို့သော်၎င်းသည်လူကိုဒုတိယအကြိမ်ရှာဖွေရန်နှင့်ရယ်စရာကောင်းအောင်ပြုလုပ်ပေးနိုင်ပြီးသူတို့က“ ဘလော့ဂ်” ထဲသို့ ၀ င်ရန်လိုအပ်သည်။ လွယ်တယ်။ အက္ခရာများနှင့်နံပါတ်များကိုအရောင်တောက်တောက်၊ ကွန်ပျူတာဖြင့်ဖြေ ဆို၍ မရသောရိုးရှင်းသည့်မေးခွန်းတစ်ခု - စာဖတ်သူကိုသာ။
Facebook သည် Captcha ကိုအသုံးပြုနေသည်
Captcha စတိုင်နည်းပညာ၏သားကောင်ဖြစ်ခဲ့သည့်နောက်ဆုံးပေါ်ကုမ္ပဏီဖြစ်သည် Facebook က။ ဒါဟာလုံးလုံးလျားလျားမျက်စိကျရုံသာမကဘဲ dang ကိုဖတ်နိုင်ရုံသာဖြစ်သည်။ Facebook ဟာသူတို့ရဲ့ site ထဲကိုကောင်းမွန်တဲ့ tools တွေနဲ့ပေါင်းစည်းမှုတွေပြုလုပ်ဖို့တော်တော်လေးကြယ်ပွင့်ဖြစ်နေတယ်။ သူတို့ကဒီမိုက်မဲတဲ့နည်းပညာကိုသုံးခဲ့တာလား။ Typepad နဲ့တခြားသူတွေရောင်းစားတာသိပ်မကောင်းဘူး။
အချို့ကမူ“ အလုပ်ဖြစ်တယ်” ဟုဆိုနိုင်သည်။ ၀ က်ဘ်ဆိုဒ်မှပြproblemနာကိုဖယ်ရှားပြီးသုံးစွဲသူအပေါ်ထားရှိသည့်အနေဖြင့်၎င်းသည်လေးစားမှုဖြင့်သာအလုပ်လုပ်သည် ဤသည်ခွင့်မလွှတ်နိုင်သောဒီဇိုင်းဖြစ်ပြီးပိုကောင်းသောနည်းလမ်းများရှိသည်! ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်ကိုတည်ထောင်သူ…အခွင့်အရေးယူပါ၊ တစ်ခုခုတီထွင်ပါ။ ဖန်တီးမှုရှိပါ။
Douglas Karr Saturday, July 14, 2007 Sunday, October 4, 2015
14:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 10
captcha နှင့်ဆင်တူသောဆန်းသစ်သောဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုမှာ HumanAuth (နှင့် KittenAuth) ဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်သင်၏“ ကျွန်ုပ်၏ blog title ခေါင်းစဉ်ရှိနောက်ဆုံးစကားလုံး” စိတ်ကူးနှင့်လည်းဆင်တူသည်။ လူသားတစ် ဦး သည်သဲလွန်စတစ်ခုကိုဖတ်ပြီး၎င်းတို့သည်သဲလွန်စ၏သဘောသဘာဝကိုနားလည်ကြောင်းသက်သေပြရမည်။ မည်သည့်ကွန်ပျူတာကမျှထိုအရာကိုမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ သင် AI ကိုသာနားထောင်မည်ဆိုလျှင်မကြာမီသူတို့နားထောင်လိမ့်မည်။ တကယ့်ကိုထောင့်တခါလောက်ပါပဲ။
အကယ်၍ HumanAuth (သို့) ကွန်ပျူတာများမလုပ်နိုင်သော“ စံ” တစ်ခုခုသည် ဆက်၍ ကျယ်ကျယ်ပြန့်ပြန့်အသုံးပြုမည်ဆိုပါကသင်ပြောနေသည့်ပြတ်တောက်မှုကိုအနည်းငယ်သက်သာစေလိမ့်မည်။
ဒါပေမယ့်သင်ဆဲအကောင်အထည်ဖော်မှုအပေါ်သတိထားပါရန်ရှိသည်။ ငါသွားပြီးနောက်တစ်ခါကြည့်ခဲ့တဲ့ HumanAuth ရဲ့နမူနာကအားနည်းချက်ရှိတယ်။ ညာဘက်ပုံ ၃ ပုံကိုသင်နှိပ်လိုက်သည့်အခါ၎င်းသည်မှန်ကန်ကြောင်းသင်သိစေရန်ခလုတ်ကိုပြောင်းလဲလိုက်သည်။ ဒါကအဆင်ပြေပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကသင့်ကိုအကန့်အသတ်မရှိနှိပ်ပေးတာကြောင့်ရိုးရှင်းတဲ့ recursive algorithm ကပုံ ၃ ပုံကိုအလွယ်တကူရှာတွေ့နိုင်တယ်။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 57
ငါ HumanAuth နဲ့ KittenAuth ကိုမသိခဲ့ဘူး။ ငါဒီနည်းပညာတွေကိုလေ့လာတော့မယ်။
4:2007 pm တွင်စက်တင်ဘာ 9, 33 မှာ
သင်၌“ မှန်ကန်” သည်ဟုသင်ကမဖော်ပြပါ။ ၎င်းသည်သင်ပုံ ၃ ခုရွေးချယ်ထားကြောင်းရိုးရှင်းစွာပြောခြင်းဖြစ်သည်။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 5, 40
စိတ် ၀ င်စားဖွယ်ကောင်းသည့်အချက်မှာ၎င်းသည် ၄ ​​င်း၏ကိုယ်ပိုင်ဘလော့ဂ်နှင့်ထိုက်တန်သည်ကိုကျွန်ုပ်သေချာမသိပါ။
ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ရဲ့ site ကို (http://ajaxwidgets.comကျွန်ုပ်တို့၏ဘလော့ဂ်စနစ်အတွက် captcha မရှိပါ။ အမှန်မှာ၊ spam ဘလော့ဂ်များ၏ ၉၉.၉၉% သည် HTML ကိုကျွန်ုပ်တို့ခွင့်မပြုသည့်ရိုးရှင်းသောအချက်ကြောင့်ငြင်းပယ်ခံနေရသည်။
ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့သည် spam အမြောက်အများကိုဖယ်ရှားပေးသည့် URL field အတွက်“ link condoms” ကိုအသုံးပြုသည်။ အားလုံးမခက်ခဲ really
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 50
သောမတ်စ်ကကျွန်တော့်ရည်မှန်းချက်ကိုအာရုံမစိုက်ခဲ့ဘူး။ ၎င်းသည် 'လက်ခံနိုင်ဖွယ်' ပင်မခေတ်ရေစီးကြောင်းဖြစ်သော်လည်းအသုံးပြုရလွယ်သောနည်းပညာကိုအာရုံစိုက်ရန်ဖြစ်သည်။
ကျေးဇူးတင်ပါတယ်သောမ ထိုအခါငါဝစ်ဂျက်ကိုနှစ်သက်, ဒါကြောင့်ငါကသင်၏ site ကိုစစ်ဆေးနေပါလိမ့်မယ်!
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 45
သင်ငြီးငွေ့။ စစ်မှန်သောပုံပျက်နေသောစာသားပုံရိပ်အခြေခံသည့် captcha's ကိုသင်ဖော်ပြရန်ပျက်ကွက်သည်။
captcha သည်များစွာသောအရာများ၊ စာသားအခြေပြုခြင်း၊ မေးခွန်းနှင့်အဖြေများ၊ ပုဂ္ဂလဒိive္ ((အသေးအဖွဲရွေးခွေးခွေးကိုရွေးခြင်း) ဖြစ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်အသုံးပြုရန်ပိုမိုမြန်ဆန်သည်။ ထိုအရာသည် o သို့မဟုတ်0ဖြစ်မဖြစ်သိရန်ကြိုးစားခြင်းသည် ပို၍ အဓိပ္ပာယ်ရှိသည်။
ငါသဘောတူတယ်၊ ငါလည်းသူတို့ကိုမုန်းတယ်၊ ဒါပေမယ့်မင်းရဲ့စာမူဟာခေါင်းစဉ်တစ်ခုလုံးကိုတောင်ဖုံးကွယ်ထားခြင်းမရှိသလိုအဲဒါကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမယ်ဆိုတာနဲ့ပတ်သက်တဲ့အကြံဥာဏ်တွေလည်းမပေးခဲ့ဘူး။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 6, 54
ငါသဘောတူသည် - ကျွန်ုပ်သည်အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနည်းကိုမဖော်ထုတ်နိုင်ပါ။ အရင်းအမြစ်များနှင့်အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံရှိသောကျွမ်းကျင်သူများရှိသည့်ကုမ္ပဏီများအတွက်ကျွန်ုပ်၏ခေါ်ဆိုမှုဖြစ်သည်။ Facebook ကိုဒီနည်းပညာကိုသုံးတာကိုကြည့်ပြီးတဲ့နောက်မှာစာမူရေးဖို့ကျွန်တော်စိတ်အားထက်သန်ခဲ့တယ်။
Captcha နည်းပညာများသည်အသုံးပြုသူတင်ပြရမည့်ရိုးရှင်းသောဖောင့်ဂရပ်ဖစ်အပြင်ဘက်တွင်ထပ်နေသည်ကိုလည်းကျွန်ုပ်သဘောမပေါက်ပါ။ Captcha နည်းပညာသည်သူတို့၏ခြေရာကိုချဲ့ထွင်လာပါကအသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအားပိုမိုကောင်းမွန်လာစေရန်တိုးမြှင့်စေနိုင်သည့်စိန်ခေါ်မှုမေးခွန်းများနှင့်အဖြေများအဖြစ်သို့ကျွန်ုပ်ရောက်ရှိနေသည်။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 25
variable-variable ကိုအမည်များကိုသုံးပါ။ အသုံးပြုသူသည်စာမျက်နှာသို့ရောက်သည်နှင့်တပြိုင်နက်ကျပန်းနံပါတ်ပါသော session cookie တစ်ခုကိုသတ်မှတ်ပါ။ ထို့နောက်သင်၏“ input” tag ကို name =” comment __ [title]” ဟုပေးပြီးကျန်သင်၏ကျန်နယ်ပယ်များအတွက်တစ်ခုပေးပါ။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 7, 48
မင်းနဲ့လုံးဝသဘောတူတယ် CAPTCHA ရဲ့နာကျင်မှုက…
သို့သော်လှည့်ကွက်ကိုလုပ်သောမျက်မြင်မရသော CAPTCHA ကိုရေးရန်အလွန်လွယ်ကူသည်။ အဲဒါကိုလုပ်ဖို့ကွဲပြားခြားနားတဲ့နည်းလမ်းတွေအများကြီးရှိတယ်။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 57
Captcha ရဲ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေနိုင်ပါတယ် အခြားသူများထက်အချို့ပို။ ငါဖတ်ရန်မဖြစ်နိုင်ဘူးအချို့သောအရာများကိုငါတွေ့ပြီ (ရည်ရွယ်ချက်ကိုအနိုင်ယူသည်) ။ ငါစီမံကိန်းအနည်းငယ်တွင်သင်ဖော်ပြခဲ့သော“ မကောင်းသော” အမျိုးအစား Captcha ကိုအသုံးပြုသည်။ ဒါပေမယ့်ငါအလွယ်တကူဖတ်ဖို့လွယ်လွယ်ကူကူလုပ်ဖို့လူတွေနားလည်အောင်သူ့ ဦး နှောက်ကိုပဲ့တင်ထပ်စရာမလိုတော့ဘူး။ ဒါ့အပြင်အသုံးပြုသူမှတ်ပုံတင်သည့်အခါတိုင်း“ captcha” ကိုသာသူတို့ site ထဲထည့်ဝင်သည်မဟုတ်ပါ။ ၎င်းသည်ပြီးပြည့်စုံသောစနစ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ၊ သို့သော်၎င်းကိုလူ့စိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အချက်အပေါ် မူတည်၍ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်သည်။
သင်သွားပါက Captcha ရဲ့သူတို့ရဲ့“ HAF” (Human Annoyance Factor), Spammer Annoyance Factor စသည်ဖြင့်အဆင့်သတ်မှတ်နိုင်သည်။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 13
Captcha vs. HAF ။ ကျွန်တော်အဲဒါကိုကြိုက်တယ်!
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 19
သင်၏ပလပ်အင်ကိုအယုံအကြည်မရှိချင်သော်လည်း spam များကို wordpress တွင် filter လုပ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောနည်းလမ်းရှိသည်။ ငါအသုံးပြုတဲ့အံ့သြစရာကောင်းတဲ့ plugin တစ်ခုရှိသည်။ SpamKarma လို့ခေါ်ပြီးဒီစာမူဟာလူ့လားဟုတ်၊ မဟုတ် spam ဟုတ်မဟုတ်ဆုံးဖြတ်ရန် heuristics အမျိုးမျိုးကိုသုံးသည်။ ငါ ၁/၂၊ ၂ နှစ်လောက်သုံးပြီးပြီ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ရဲ့မှတ်ချက်ကို spam အဖြစ်ပြပြီးတာနဲ့လူတစ်ယောက်က captcha ကိုဖြည့်ပြီးတော့အဲဒီမှတ်ချက်ကိုဖြတ်ပြီးတောင်းပါ့မယ်။ ၎င်းသည်တစ်ပတ်လျှင်ရာပေါင်းများစွာ spam မှတ်ချက်များကိုဖမ်းယူနိုင်ပြီးမည်သည့်အခါမှမှ ဖြတ်၍ မရနိုင်ပါ။
ငါလည်း captchas ကိုမုန်းတယ်။ ငါတကယ် captcha ရေးခဲ့ရင်ငါကြိုက်မှာပဲ http://www.hotcaptcha.com/ လှပသောလူများ၊ မွေးမြူထားသောတိရိစ္ဆာန်များ၊ သို့မဟုတ်သတ္တဝါများကိုပုံရိပ်များမှကောက်ယူခြင်းသည်လူသားများအတွက်အသေးအဖွဲဖြစ်ပြီးအလိုအလျောက်ရေးသားထားသောစာများအတွက်အလွန်ခက်ခဲသည်။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 28
ငါ SpamKarma ကိုမသုံးပေမယ့်ငါကြား၏။ ငါမကောင်းသောအပြုအမူကိုအသုံးချပြီးကျွန်ုပ်အရင်ကရရှိခဲ့သောထင်မြင်ချက်များ spam ၁၀% နှင့်သာကိုင်တွယ်ရန်လိုအပ်သည်။
ငါ Hot Captcha ကိုစစ်ဆေးပါမည်။ ကျွန်ုပ်မြင်ချင်သောအသံနှင့်ဆင်တူသည်။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 23
ဒီ post ကအဓိပ္ပာယ်မရှိဘူး။ သင့်ရဲ့ဖြေရှင်းချက်စကေးမ။ ဘလော့ဂ်ကိုအချိန်တိုင်းဖြည့်စွက်ခြင်းအားဖြင့်သင်၏လုံခြုံရေးအစီအမံကိုကျော်လွှားရန်“ bot” ကိုအလွယ်တကူစီစဉ်နိုင်သည်။ သင်ဖြေရှင်းရန်မေးခွန်းများ - သင်ရေးသားရန်ဂရုပြုသကဲ့သို့မေးခွန်းများစွာရှိသည်။ Facebook, ticketmaster, ဒါမှမဟုတ် yahoo တို့ကဒီလိုမျိုးဖြေရှင်းနည်းကိုဘယ်လိုအကောင်အထည်ဖော်မလဲ။
ဤ post သည်အနည်းငယ်အာရုံစိုက်မှုနှင့်သင်၏ကြော်ငြာဝင်ငွေတက်မောင်းဖို့လုံလောက်တဲ့ရယ်စရာဖြစ်ခဲ့သည်။ ဒီဘလော့ဂ်ကို“ ဖြည့်စွက်” ရန်သင်ပိုမိုကြိုးစားရန်လိုအပ်သည်။ ငါဖတ်ရှုရကျိုးနပ်အကြောင်းအရာနှင့်အတူစတင်ချင်ပါတယ်။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 12, 34
Wow, Matt ။ တစ်စုံတစ်ယောက်ကဒီနေ့အနည်းငယ်စိတ်လှုပ်ရှားစရာကောင်းသောအသံဖြစ်သည်။
မင်းရဲ့ post ကိုတကယ်ဖတ်တာမဟုတ်ဘူးလို့ထင်ရတယ် ကျွန်တော့်ရဲ့ဖြေရှင်းချက်ဟာအတိုင်းအတာအထိကြီးထွားလာမှာမဟုတ်သလိုဒီကုမ္ပဏီတွေကမသုံးသင့်ဘူးလို့ဘယ်တော့မှမပြောဘူး။ ငါ ကိုပြု ငါပြောချင်တာကအချို့သောကုမ္ပဏီများ (ဖေ့စ်ဘွတ်ခ်) သည်ပိုမိုတီထွင်ကြံဆနိုင်သည့်ဖြေရှင်းနည်းကိုပေးသည်။ ကျွန်တော့်ပလပ်အင်ကသင့်ကိုစိန်ခေါ်မှုမေးခွန်းကိုပြောင်းလဲပြီးသင်လိုချင်သည့်အခါတိုင်းဖြေဆိုခွင့်ပြုသည် - မည်သည့် bot ကမှထိုအတိုင်းမလုပ်နိုင်ပါ။ ယနေ့အထိကျွန်ုပ်အနေဖြင့်ဤဖြေရှင်းချက်မှကျွန်ုပ်၏ဆက်သွယ်ရန်စာမျက်နှာတွင် SPAM မရှိပါ။
ဥပမာတစ်ခု - Facebook မှာစာမျက်နှာပေါ်ကကြော်ငြာကိုသုံးပြီး“ ဒီစာမျက်နှာမှာဘယ်သူ့ကြော်ငြာလဲ။ ” မေးတာမှအကျိုးရှိတာဖြစ်နိုင်တယ်။ မည်သည့်အရာမဆိုကိန်းဂဏန်းများနှင့်အက္ခရာများကိုရိုက်ခြင်းထက် ပို၍ ကောင်းသည်။ အကယ်၍ သင်အမှန်တကယ်ဖတ်နိုင်လျှင်ဖြစ်သည်။
ရွှင်လန်း! စာရင်းပေးသွင်းရန်သေချာစေပါ hehe
16:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 12
“ ဒီစာမျက်နှာပေါ်မှာဘယ်သူကြော်ငြာလဲ” ဆိုတာစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့အကြံဥာဏ်တစ်ခုပါ။ Moola.com ဆိုသော ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်၎င်းကိုယခင်ကအကောင်အထည်ဖော်ခဲ့သည်။ သို့သော်၎င်းတို့သည်၎င်းကိုအထူးသဖြင့် spam-တားဆီးခြင်းနည်းလမ်းထက်၎င်းတို့၏ကြော်ငြာရှင်များ (interstitial အနေဖြင့်) ကိုအာရုံစိုက်ရန်နည်းလမ်းအဖြစ်အသုံးပြုသည်။
သူတို့ထဲကတချို့က ၂၀ စက္ကန့်ကြော်ငြာဗီဒီယိုကိုကြည့်ပြီး“ ဒီကုမ္ပဏီအတွက်ဘယ်ကုမ္ပဏီအတွက်ကြော်ငြာကြတာလဲ” စသဖြင့်မေးခွန်းထုတ်ပါလိမ့်မယ်။ ငါ (အထူးသဖြင့်) ငါ (စောင့်ဆိုင်းရန်မုန်းသည်) သည်ထိုနည်းလမ်း၏ပရိတ်သတ်မဟုတ်သော်လည်းဝင်ငွေကြော်ငြာကိုထိုသို့သောအရာကဘာလဲဆိုတာကြည့်ဖို့စိတ်ဝင်စားဖို့ကောင်းလိမ့်မည်။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 4, 30
ကြီးမားသောစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည့်အချက်အပြင် CAPTCHA များသည်ပြည့်ဝသောအမြင်အာရုံထက်နည်းသောမည်သူမဆိုအတွက်ပုံမှန်လက်လှမ်းမမှီနိုင်ပါ။
သင်ဖတ်ရန်ခက်ခဲသော CAPTCHA တစ်ခုကိုမြင်ယောင်ကြည့်ပါ၊ ထို့နောက်အမြင်အာရုံချို့တဲ့သူတစ် ဦး အားသွားခွင့်ပေးပါ။ ခက်ခဲလား မဖြစ်နိုင်သလောက်
အမြင်အာရုံမရှိသူ၊ ဝဘ်ဆိုက်ဖန်သားပြင်ဖတ်စက်သို့မဟုတ်မျက်မမြင်နည်းပညာနှင့်မည်သို့ဆက်သွယ်မည်နည်း။ CAPTCHA ကိုပရိုဂရမ်များမဖတ်နိုင်အောင်ဒီဇိုင်းပြုလုပ်ထားသည်။ ဤကိစ္စတွင်, မသန်စွမ်းအသုံးပြုသူလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ။
လက်လှမ်းမီနိုင်သော CAPTCHAs အနည်းငယ်သာရှိသည်၊ မမြင်ရသောသူများအတွက်အသံ CAPTCHA ပါ ၀ င်သောဥပမာများသည်ဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်။ သို့သော်အသုံးဝင်သောထည့်သွင်းစဉ်းစားရမည့်အချက်များက၎င်းကိုကျွန်ုပ်အကောင်အထည်ဖော်ရန်ဘယ်တော့မျှစဉ်းစားမည်မဟုတ်သောနည်းပညာတစ်ခုဖြစ်စေသည်။ အခြားနည်းများဖြင့်ရိုက်နှက်ပါ၊ သင်၏အမှန်တကယ်အသုံးပြုသူများကိုမပေးရ (dofollow plugin ကိုကျွန်ုပ်အသုံးပြုရသည့်အကြောင်းရင်း) ။
15:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 8, 43
Captchas မကောင်းဘူးမဟုတ် မကောင်းတဲ့ captchas မကောင်းတဲ့ဖြစ်ကြသည်။ သင်မဖတ်နိူင်သောကြောင့်သူတို့ရှာဖွေရန်အလွန်ခဲယဉ်းပါကဆိုးသည်။
1. နံပါတ် 1 (0-9)
2. နံပါတ်2(0-9)
ဒါကိုလုပ်ပြီးပြီဆိုရင်သင်္ချာကအရမ်းလွယ်တယ်၊ အဖြေက script ရှုထောင့်ကနေဘာနဲ့အလွယ်တကူရနိုင်တယ်ဆိုတာကိုသင်ရှင်းထုတ်နိုင်တယ်။
16:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 13
ကျွန်ုပ်တစ်နေရာရာတွင်တွေ့ကြုံခဲ့ရသောသပ်သပ်ရပ်ရပ်ဖြေရှင်းချက်တစ်ခုမှာ“ ကျွန်ုပ်သည် spammer” ဟုအမှတ်အသားပြုထားသည့်အမှတ်အသားဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်ပုံမှန်အားဖြင့်စစ်ဆေးခြင်းခံရသည်။ မှတ်ချက်ပေးတာထက်အလိုအလျောက် signup လုပ်တာကိုတားဆီးတဲ့အခာမှာဘလော့ဂ်မှတ်ချက်များမှာများသောအားဖြင့်စစ်ဆေးဖို့လိုအပ်တဲ့ checkboxes များမရှိခြင်းကြောင့်ပိုကောင်းပါတယ်။
ဟုတ်ပါတယ်အဆုံးမှာတော့ AIs ကအဲဒါကိုမချိုးဖောက်ခင်အချိန်ပဲ။ ဒါပေမယ့်စက်ရုပ်ကဘယ်တော့မှပြိုကွဲမှာမဟုတ်ဘဲပြီးပြည့်စုံတဲ့ဖြေရှင်းနည်းရှိမယ်လို့တော့မထင်ပါဘူး။ ဒါကြောင့်ဒီဟာကလုံလောက်ပါတယ်။ အသုံးပြုသူရဲ့အတွေ့အကြုံကိုအနှောင့်အယှက်မပေးနိူင်ပါဘူး။
16:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 9, 18
ဒီ "အာရုံစူးစိုက်မှုကိုရယူခြင်း" post ကိုဖြစ်ခြင်းနှင့်ပတ်သက်။ အနုတ်လက္ခဏာမှတ်ချက်များနှင့်အတူကဘာလဲ? ဆွေးနွေးမှုတွင်သင်၏အသံကိုထည့်သွင်းခြင်းသည်မကောင်းသောအရာဖြစ်သည့် အချိန်မှစ၍ ဖြစ်သည်။ Heck, မှတ်ချက် 17 ခုနှင့်အတူ, ကသိသာလူတွေစိတ်ဝင်စားတဲ့ခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါတယ်။
ထို့အပြင် အကယ်၍ ဤအရာသည်လူတို့၏အာရုံကိုဆွဲဆောင်နိုင်သည့်ခေါင်းစဉ်တစ်ခုဖြစ်ပါကသင်ဘာကြောင့်ဤ blog အကြောင်းရေးသားချင်မည်မဟုတ်သနည်း။
17:2007 pm တွင်ဇူလိုင်လ 11, 34
ဒါက CAPTCHA မဟုတ်လား
မေလ 20, 2008 မှာ 10: 55 AM
yech, ငါ captchas အနည်းငယ်စိတ်နာကျင်ဖြစ်ကြောင်းသဘောတူ, ငါသူတို့မသန်စွမ်းသူများအတွက်အတားအဆီးဖြစ်ကြောင်းသဘောပေါက်ဖို့စိတ်မကောင်းပါဘူး, ဒါပေမယ့်ငါမကြာသေးမီကပဲ
ရက်တွေ reCaptcha system ၏သဘောသဘာဝကိုကျွန်တော်ဘယ်လောက်အထိတန်ဖိုးထားတယ်၊ အကြောင်းကတော့စာအုပ်များကို decipher လုပ်ရာတွင်ကူညီနေစဉ် spam များကို (သင် ၁၀၀% ထိရောက်စွာသော်လည်းကောင်း၊ ထိရောက်စွာသော်လည်းကောင်း) ပိတ်ဆို့နေသောကြောင့်ဖြစ်သည်။
အသုံးပြုသူအတွေ့အကြုံအပေါ်သူတို့၏ဆိုးကျိုးသက်ရောက်မှုကိုအငြင်းပွားစရာမလိုပါ။ သို့သော်လူအများအပြားမှလူတစ် ဦး ချင်းစီမှအနည်းဆုံးအားထုတ်မှုကိုအသုံးပြုခြင်းသည်အလွန်ဉာဏ်ရည်ပြည့်ဝသည့်ကွန်ပျူတာပင် (Optical Character Recognition ကိုမရှုတ်ချသည့်စာသားကိုဖတ်ပါ) သည်အလွန်ကြော့ရှင်းကြောင်းဝန်ခံရန်လိုသည် အဖြေ။
ယေဘုယျအားဖြင့်ပြောရရင်ဟုတ်ကဲ့၊ ဖြစ်နိုင်ရင် Code အစားတီထွင်ဖန်တီးမှုကိုကျွန်တော်သုံးပါတယ်။
သူ Mike Golvach
15:2009 pm တွင်ဖေဖော်ဝါရီ 6, 59 တွင်
ကောင်းတဲ့အတိုချုပ် မင်းပို့စ်ရဲ့ဖြစ်နိုင်ချေရှိတဲ့ရည်ရွယ်ချက်နဲ့ပတ်သက်ပြီးငါလည်းလွင့်မျောနေတယ်။ အထူးသဖြင့်အခြားသူများကသင်၏“ အဖြေ” သို့မဟုတ်“ အခြားနည်းလမ်း” ကိုသင်၏ပေးမှုမရှိခြင်းကိုထောက်ပြသည့်အခါသင်၏မှတ်ချက်ပုံစံပလပ်ဂင်နှင့်သင်၏အဆက်အသွယ်စာမျက်နှာဆွေးနွေးခြင်း (သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တစ်ခုခုလွဲချော်သွားခြင်းလော) နှင့်သင်ပြုခဲ့သည့်အတိုင်းကျွန်ုပ်ကျိန်ဆိုနိုင်သည့်နေရာတွင် (သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်တစ်ခုခုလွဲချော်ခဲ့သလား။ ထင်မြင်ချက်များကိုဖော်ထုတ်ပါ (မျှဝေပါ) ၎င်းတို့သည်မထိမခိုက် (အချည်းနှီးဖြစ်သောပြီးမြောက်အောင်မြင်ခြင်း) မတိုင်မှီ (ဥပမာ - ဤကဲ့သို့သော) တိုတောင်းသောစာတိုကိုတောင်ဖတ်ရန်မနှောင့်ယှက်ပါနှင့်။
ဤသည်မှာစိတ် ၀ င်စားစရာဆွေးနွေးငြင်းခုံမှုတစ်ခုဖြစ်ပြီး၊ ဖြေရှင်းနည်းတစ်ခုရှိမရှိ၊ နောက်ဆုံးတွင်၎င်းသည်သင်၏ဘလော့ဂ်ဖြစ်သည်၊ ၎င်းသည်အချို့သောမှတ်ချက်များနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်အားအနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေသည်ကားအဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် blogging သည်အများပြည်သူ၏တာ ၀ န်ဖြစ်လာသည်။ သင်တစ်ခုခုအကြောင်းရေးချင်လျှင်၎င်းအကြောင်းကိုရေးပါ။ စာမဖတ်လိုသူမည်သူမဆိုဖတ်ရန်မတတ်နိုင်ပါ။ အကယ်၍ မင်းကအားသွင်းနေရင်၊ ဒါကမတူကွဲပြားတဲ့ဇာတ်လမ်းဖြစ်လိမ့်မယ်။ ဒါပေမယ့်ငါသာမှန်မယ်ဆိုရင်၊ လူအများရဲ့ဆန္ဒနဲ့သူတို့ခေါင်းထဲမှာပေါ်လာသမျှအရာအားလုံးကိုတင်ထားပြီးလူအများရှေ့ပြသဖို့ထုတ်လွှင့်ချင်တဲ့ဆန္ဒကနေဘလော့ဂ်များပေါ်ပေါက်လာတယ်။ သို့မဟုတ်ပိုမိုလွယ်ကူသောသူငယ်ချင်းများနှင့်မျှဝေရန်။ ဘလော့ဂ်အတော်များများရဲ့အကြောင်းအရာတွေဟာလူအများသိရှိနိုင်ရန် (သို့) တိုက်ရိုက်မပါဝင်တဲ့သူတွေကိုတောင်စိတ်ဝင်စားဖို့မကောင်းဘူး။
သင်၏ကြော်ငြာ ၀ င်ငွေကိုမြှင့်တင်ရန်ဤပို့စ်ကိုသုံးခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်ရယ်မိသည်။ သင်၏အတွေ့အကြုံသည်ကျွန်ုပ်၏အတွေ့အကြုံထက်ပိုကောင်းသည် (သို့သော်ကျွန်ုပ်မျှော်လင့်ပါတယ်) ။ သို့သော်သင်ထုတ်ကုန်တစ်ခုမြှင့်တင်ရန်ဘလော့ဂ်မလုပ်ပါကသင်သည် captcha အကြောင်းရေးနိုင်သည်။ သို့မဟုတ်အနံ့ယေဘုယျခွေးအစားအစာမည်မျှရှိသည်နှင့်သင်၏ဆက်စပ်သည့်ကြော်ငြာစနစ်သည်မည်သည့်အရာကိုရေးနိုင်လိမ့်မည်။ တစ်ခုခုကိုအခြေအနေမှာ၎င်း၏ပုံမှန်အတိုင်းခန့်မှန်းရခက်မှုနှုန်းမှာပေးဆောင်😉
ဆိုလိုသည်မှာ CAPTCHA ထုတ်လုပ်သူများဖတ်နေလျှင်အသံထည့်ခြင်းအတွက်ကျေးဇူးတင်ပါသည်။ စိတ်လှုပ်ရှားဖွယ်ကောင်းသောအဖြူရောင်ဇယားကွက်ပါရှိပြီးအနက်ရောင်အဖြူရောင် (နှင့်လုံးဝပုံပျက်နေသော) အက္ခရာများ (တစ်ခါတစ်ရံရုပ်ပုံ၏အစွန်းတွင်) တင်ထားသည့်အနက်ရောင်မြေအောက်အနက်ရောင်သည်နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းလျောက်ပတ်သောအမြင်အာရုံရှိသောလူသားတစ် ဦး ကိုစာဝှက်ရန်ခက်ခဲသောအခြေအနေတစ်ခု၏အကောင်းဆုံးဥပမာတစ်ခုဖြစ်သည်၊ ပရိုဂရမ်ဖြစ်ကောင်းအလွယ်တကူအချိန်ကြာလာတာနဲ့အမျှဖြေရှင်းနိုင်ပါလိမ့်မယ်။
ငါ့ ၂ ဆင့်ပဲ၊